Col. C/Llahi Yusuf Oo Hoy La’aan Ku Soo Dhacay, Dantuna Biday Inuu Meereysto Gobolka Bari Iyo Nairobi Inta Baydhabo Looga Diyaarinayo Hoy Cusub iyo Maxamed Dheere, Geeddi iyo Jurille Oo Ka Shaqeynaya Inuusan Helin Hoygaas Cusub.
Col. C/llahi Yusuf oo ka soo shaqeeyey in Shariif Xasan uu ku kulansiiyo xubnaha barlamaanka magaalada Baydhabo ayaa ku soo dhacay hoy la’aan kadib markii Maxamed Dheere ay u caadatay sida Col. C/llahi uu uga abaal dhacay martigelintii qurxooneyd ee dadweynaha Jowhar ay ku garab istaageen kooxda taageersan siyaasada Col. C/llahi. Siyaasad ahaan Col. C/llahi ayaa aad uga fekerey inuu kala doorto Geeddi iyo Shariifka, waxeyna siyaasiyiinta Bari kula taliyeen inuu qaato saaxiibtinimada Bay, Jowharna uu ka alaabo urursado.
Gadoodka Gudoomiye Maxamed Dheere ayaa waxaa sababay kadib markii lacagihii deeqda dibeda looga helay Col. C/llahi loogu shubay xisaabaad shaqsiyaad gaara bangiyada dibeda uga furan. Sidoo kale Maxamed Dheere waxaa ka careysiisay tixgelin la’aanta uu Col. C/llahi uu ku sameeyey miisaanka Geeddi oo ka soo jeeda beesha ugu tirada badan tolweynaha Soomaaliyeed. Maxamed Dheere ayaa iska dhaadhiciyey in awooda beelaha Muqdisho ay isaga iyo Geeddi ay wakiil uga yihiin u qeybqaadidooda. Markii ay u muuqatay in Col. C/llahi iyo Shariif Xasan ay talada sare ee dalka keligood isku koobaan ayaa waxaa u cadaatay ineysan jirin tixgelin loo hayo beelaha Muqdisho iyo cid miisaankooda lagu tixgelinayo.
Prof. Geeddi ayaa go’aansaday inuu ku caasiyoobo Col. C/llahi kadib markii uu wax badan u dulqaatay oo uusan rabin inuu ka aqbalo. Geedi ayaa hadda u muuqda inuu dabarka xijiyey Col. C/llahi, kadib markii Geeddi uu si cad u diidey inuu magaalada Gaalkacyo kula kulmo C/llahi Yusuf oo sida badan ku guuleysan jirey inuu madax salaax ku qanciyo cabashooyinka uu tabanayo Geeddi. Prof. Geeddi ayaa aaminsan in lagu howl geliyey siyaasad isaga ka hor keentay beelaha degan Muqdisho oo ay isku heybta yihiin, haddana markii lagu hubsaday inuu gooni uga soo dhex baxay beeshiisa, ayuu Col. C/llahi wuxuu heshiis hoosaad la galay mucaaradkii uu hogaaminayey Shariif Xasan oo horay Geeddi loogu adeegsaday inuu dhulka ku jiido.
Juriile ayaa isna arrinta Baydhabo ka muujiyey dareen xoogan isaga oo dhinaca siyaasda ku wehliya Prof. geeddi. C/risaaq Cusman Xasan Juriile ayaa maalgelin badan geliyey doorashadii madaxweynenimada C/llahi Yusuf, balantuna waxey ahayd inuu soo ceshado lacagtii ka baxday iyo faa’iidadeeda. Wuxuuna kaloo Juriille uu door weyn ka qaatay in Geeddi uu noqdo wasiirka kowaad. Geedi iyo Jurille waxey kawada tirsanayeen macalimiinta Jaamacada ummadda, Juriilana waxaa u xaqiiqsaneyd inuu xujo la’aan hantidiisa soo ceshanayo haddii uu Geeddi noqdo wasiirka kowaad oo labadooda uu wax wada qabsi hore uga dhexeeyey. Juriile oo filayey in lacagaha deeq ahaan u soo gashay Col. C/llahi oo ka kala timid Sacuudiga, Liibiya, Yemen, Itoobiya, iyo Kuweit iney soo gasho sanduuqiisa iskaashiga ayaa ogaadey in lacagahaas lagu shubay xisabaad gaara sidaasna ku waayey xoolihiisa. Jurille ayaa hadda u muuqda mid la safan Geeddi, ujeedadiisuna waa in Geedi lagu soo wareejiyo qarashka lagu maamulayo shirka baarlamaanka oo ay bixinayaan deeq bixiyeyaasha caalamka iyo in wixii xiriirka caalamka ka imaanaya Geeddi lagala soo xiriiro, mar haddii uu yahay madaxa sida sharcigu qabo xaqa u leh inuu maamulo dowlada Soomaalida.
Dowladda Itoobiya ayaa ciyaareysa shax siyaasadeed oo ay ku dooneyso Maxamed Dheere, Geeddi, Jurille, Shariifka iyo Col. C/llahi iney u soo kala dacwoodaan, waxaana weli socda wada hadal la doonayo shariifka in lagu geeyo Itoobiya si uu ugu soo biro xulafada ay taageereyso Itoobiya si isna uu u xagsado jagadiisa gudoomiyenimo. Juriile iyo Geeddi ayaa laga yaaba iney ku guuleystaan afgembiga ay la doonayaan Col. C/llahi haddii uusan ka noqon tilaabada uu ku taageerayo Baydhabo. Itoobiya ayaa aaminsan in labadan nin ay yihiin aqoon yahan ka xeel dheer dhan walba Col. C/llahi, sidaasna u aragta danteeda mustaqbalka dheer ay ku jirto iney mudnaanta siiso Jurille iyo Geeddi. Haddii aan la tixgelin siyaasada labadaan nin waxaa laga yaaba iney fashiliyaan sir badan oo ay ka og yihiin Itoobiya haba ugu badnaato tan uu C/llahi hadda ku doonayo inuu ka abaabulo Baydhabo. Baydhabo ayaa hadda waxaa la xaqiiqsan yahay iney ka ag dhow yihiin ciidamo Itoobiyaana oo loo qorsheeyey iney sugaan amaanka Baydhabo, ujeeddaduna ay tahay marka dhamaan ay soo wada xaroodaan xubnaha baarlamaanka iyo kuwa dowlada, iyo kuwa rajada ka leh qeybsiga dhiman ee dowlada, iney Itoobiya dhamaantood geliso xabsi ay ku joogayaan Baydhabo inta laga aruurinayo hubka, iyagana loo heysanayo madax furasho si aysan maleeshiyooyinkoodu u qaadin wax tilaaba. Waxaa iska cad haddii Itoobiya ay soo gasho Baydhabo in hubka iyo dadka ka qeybgalaya shirkuba aysan soo noqoneyn, waxaana ugu horeeya cida loo dan leeyahay Shariif Xasan iyo hogaamiyaasha Kismaayo iyo Xamar.
Dagaalka hadda ugu culus oo u dhexeeya Geeddi iyo Col. C/llahi ayaa dhowaan waxaa la filayaa in dowlada Itoobiya ay ka qaadato mowqif xeeladeysan, taas oo dagaalka siyaasadeed ee labadaas nin dhinac u rideysa. Haddii Col. C/llahi looga adkaado dagaalkaas, waxey noqoneysaa in Col. C/llahi ay Itoobiyaanku ku qanciyaan inuu isaga baxo siyaasada uuna dego Bari oo uu caafimaadkiisa ku daryeelo. Haddii ay ku liibaanan Jurille iyo Geeddi dadaalkooda waxaa laga yabaa iney tanaasul badan u sameeyaan kooxda Muqdisho, sidaasna ay labadaas nin ku kala hogaamiyaan madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha dowlada. Itoobiya ayaa labadan nin u aragta iney doonayaan iney wax qabsadaan, soomaalidana rabaan iney ku hogaamiyaan siyaasad nabadeed madaama aysan ahayn dagaaloogayaal, meesha ay u aragto Col. C/llahi inuu yahay nin aan dooneyn nabad, xoolo ama madaxtinimo laakiin ay ku weyn tahay aarsi iyo inuu ka tago dagaal uu ku helo magac qabiil si uu u soo ceshado sumaciidiisa dagaal oo Soomaalidu ay ka heysato inuu ahaa sarkaal aan ku nasiib badneyn guulaha dhinaca dagaalka.